Indlu eyakhiwe ngamapulangwe eyakhiwe ngamapulangwe e-Fort Pillow ilala abantu abangu-7, i-kayak, i-hike - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe eyakhiwe ngamapulangwe e-Fort Pillow ilala abantu abangu-7, i-kayak, i-hike
Henning, Tennessee, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Desere
U-Desere Ungumbungazi ovelele
Lungiselela ukukhipha ubuchwepheshe futhi ulethe wonke umndeni, kuhlanganise nenja futhi ubone ukuthi imvelo injani. Kuzungezwe nxazonke ngamanzi ahlanzekile- kungukudoba okungcono kakhulu! Kuyi-Duck Hunters heaven, ama-Bucks aningi futhi izimfudu zinkulu! Funda ngempi Yombango futhi ujabulele i-Fort Pillow State Park enhle engaphansi kwamamayela ambalwa ukusuka emnyango wethu. Ilala abantu abangu-9 ngokunethezeka(imibhede engu-5) ngemibhede ehamba phambili njengeyengeziwe. Sinezindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezingu-3, izindawo ezingu-4 ze-RV esayithini. I-Kayak, Ibhayisikili, Ukuhamba, Funda, noma vele
Okusha: ake sihlele usuku lwakho olukhethekile njengoSuku lwe-Valentine, isikhumbuzo noma usuku lokuzalwa ngamabhaluni, ukudla okukhethekile nezipho zomuntu omthandayo!
Sisanda kuvuselela igumbi lokuphumula ukuze lihlanganise usofa omusha wokulala olala umuntu oyedwa omdala noma izingane ezingu-2 ngokunethezeka. Futhi sifake isiqandisi esisha.
Sinekamelo lomphakathi esilibiza ngekamelo lokuhlangana esilisebenzisa ngo-September kuze kube ngu-April ngokudla kwasekuseni, isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa. Kukhona umshini wokuwasha nokomisa lapha otholakalayo ukuze zonke izivakashi ziwusebenzise. Uzothola nezincwadi, imidlalo, amabhayisikobho nama-cds. Kukhona nezinto zikagesi ezengeziwe zasekhishini ezitholakalayo lapha.
SiseNtshonalanga ye-Tennessee imayela elilodwa nje ukusuka eMfuleni wase-Mississippi ozungezwe imizila eminingi. Enyakatho yethu sine- “John Tully” indawo yokuphatha umhlaba eyaziwa ngobukhulu bamagilebhisi ayo. Eningizimu yethu kunesiphepho se-Lower Hatchee sezilwane zasendle esilokhu siyindawo yokuphumula yokufuduka kwedada iminyaka engu-150. Umnyango olandelayo yi-Chamber Lake, ngeshwa lokhu kudlula ngokuqondile emgwaqweni kusuka ezindlini ezakhiwe ngamapulangwe. Ngentshonalanga yethu ilele e-Fort Pillow State Park enhle nenomlando. Leli paki linemizila yokuqwala izintaba, amachibi, ukufinyelela emfuleni, amamyuziyamu nokunye okuningi.
Asinawo omakhelwane abaningi, kodwa abantu lapha banobungane kakhulu.
Uma ufuna ngempela ukushaywa wumoya futhi uxhumane kabusha nomndeni wakho, lena yindawo.
Isivakashi esisodwa senze ividiyo https://youtu.be/hypIyvw9s0w
Zonke izihambeli zamukelekile ukuthi zingqongqoze emnyango wami uma ngisekhaya. Bangaphinde bangishayele noma bangithumelele imiyalezo nganoma yisiphi isikhathi. Siphinde sibe nomphathi wendawo, u-Richard ohlala esizeni kanye nomgcini wezindlu ohlala eduze, u-Miss April. Siyajabula ukwabelana nawe ngolwazi lwethu lomphakathi futhi siphakamise imisebenzi nezindawo esingazivakashela ngesabelomali.
Esinye isivakashi sasifaka kuvidiyo yaso ethi Hunting
Zonke izihambeli zamukelekile ukuthi zingqongqoze emnyango wami uma ngisekhaya. Bangaphinde bangishayele noma bangithumelele imiyalezo nganoma yisiphi isikhathi. Siphinde sibe nomp…
UDesere Ungumbungazi ovelele